Madaxa Ilaalada Nukliyeerka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dabagalka Iiraan uusan 'sii socon karin' - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Madaxa Ilaalada Nukliyeerka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dabagalka Iiraan uusan...
Agaasimaha Guud ee Wakaaladda Nukliyeerka Caalamiga ah (IAEA) Rafael Mariano Grossi ayaa wareysi uu siiyay NBC News ku sheegay in dabagalka barnaamijka Nukliyeerka Iran ee ay ilaaliso Qaramada Midoobay aysan hadda sii soconkarin.
Grossi ayaa u sheegay shabakadda wararka ee Mareykanka in dunidu aysan “awoodin” inay dib u ilaaliso “dhaqdhaqaaqa nukliyeerka Iran kadib markii Tehran ay diiday inay beddesho kaamirooyinka dhismaha TESA Karaj oo bishii Juun ay waxyeelo gaadhey Iiraana ku eedaysay Israel inay waxyeelaysay camaradahaa.
Madaxa hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dabagalka nukliyeerka ayaa sidoo kale sheegay in uusan la hadlin wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Iiraan, Hossein Amir-Abdollahian, oo qabtay jagadan bishii Agoosto markii uu magacaabay madaxweynaha cusub ee Iiraan, Ibraahim Raisi.
Intii lagu guda jiray wareysiga, oo ka dhacay ka dib booqasho rasmi ah oo uu ku tagay Washington, Grossi wuxuu sheegay inuu sameeyay xidhiidh toos ah oo lala yeesho diblumaasigii hore ee Iran, Mohammad Javad Zarif.
“Waligey lama hadlin wasiirka cusub ee arrimaha dibadda,” ayuu yiri Grossi. “Waxaan rajeynayaa inaan awood u yeesho inaan helo fursad aan kula kulmo isaga dhawaan maxaa yeelay waa mid aad muhiim u ah.”
Grossi wuxuu sheegay inaysan jirin “wax tilmaamaaya” in Iiraan ay u ordeyso sidii ay u heli lahayd bam nukliyeer ah, laakiin xaaladda Kuuriyada Waqooyi ay muujineyso waxa qatarta ah. Kormeerayaasha Nukliyeerka ayaa laga eryay Kuuriyada Waqooyi sanadkii 2009 waxaana hadda dalkaasi lagu tuhunsan yahay in ay haystaan tobaneeyo madaxyada nukliyeerka ah.
“Kiiska DPRK waa inuu na xusuusiyaa waxa dhici kara haddii dadaallada diblomaasiyadeed ay khaldamaan,” ayuu yiri Grossi. “Waa tusaale cad, waa tilmaan, waa iftiin. Haddii diblomaasiyaddu ku fashilanto, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto xaalad saamayn siyaasadeed oo weyn ku yeelan karta Bariga Dhexe iyo wixii ka dambeeya. ”
Previous articleMega-projects, world-leading developments, build China’s transportation strength
Next articleDumarka Senegal ayaa Sabtidii isugu soo baxay waddooyinka Dakar si ay uga soo horjeedaan isbedelka cimilada.